Vanuatu, paradisa lavitra | Vaovao momba ny dia
Vanuatu, paradisa lavitra
Mariela Carril | | mpitarika, Vanuatu
Ny nosy Pasifika atsimo dia mahagaga ny very amin'ny fialan-tsasatra paradisa. Manana morontsiraka fotsy na mainty mahafinaritra, ala mando, lanitra manga izy ireo ary manana fomba fiaina milamina izay tsy vitan'ny asa na fanararaotana eropeana.
Androany no horesahintsika Vanuatu, repoblika nosy izay nahalala ny fomba ho eo an-tanan'i Frantsa sy Angletera ary miandry antsika anio ho safidy mankany amin'ny toerana malaza kokoa toa an'i Bora Bora, Papetee na Tahiti. Sahy manidina ve ianao?
2 Zavatra tokony hatao any Vanuatu
3 Aiza no hijanonana ao Vanuatu
4 Ahoana ny fomba hahatongavana any Vanuatu
Izany dia archipelago volkanika izay sahabo ho 1750 kilometatra miala an'i Aostralia. Raha misy zavatra fantatrao momba ny tantaran'ity faritra ity amin'izao tontolo izao dia nantsoin'ny mpifindra monina hoe New Hebides. Izy dia kintana tamin'ny iray tamin'ireo hetsika fahaleovan-tena farany tamin'ny taonjato faha-70 satria tamin'ny taona 1980 dia nanomboka niresaka momba ny fahalalahan'ny fanjanahan-tany ary niforona tamin'ny taona XNUMX ny repoblika ankehitriny.
Tsy nanana izay voalaza ho fiainana politika mangina izy hatrizay ary ny herin'ny natiora dia tsy niara-niasa ihany koa, nanomboka teo horohoron-tany sy cyclone Nisy fahasimbana be dia be izay, tany amin'ny firenena toy izao, niteraka korontana. Fa mitohy, araka ny tokony ho izy, noho izany ny hatsaran-tarehiny voajanahary dia nampifantoka ny ampahany tamin'ny toekarem-panahiny amin'ny fizahan-tany.
Ny nosikely manana nosy 83, maro amin'izy ireo no lavon'ny tendrombohitra sy fiavian'ny volkano. Ny renivohitra dia Port Vila, amin'ny nosy Éfaté na dia tanàna iray lehibe hafa aza i Luganville, amin'ny nosy Fanahy Santo. Na eo aza ny pacte Anglo-French nitantana azy hatrizay ny fiteny ofisialy dia frantsay.
Zavatra tokony hatao any Vanuatu
Ny toerana hahalalana azy dia azo atao mifantoka any amin'ny nosy Éfaté sy Espíritu Santo amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana manodidina. Ny hetsika ataontsika dia ho any ivelany sy amin'ny natiora eo an-toerana no tena mahery fo.
Ny sidina iraisam-pirenentsika dia mamela antsika any Port Vila ary miankina amin'ny fotoana ahafahantsika mandeha mitsangatsangana sy misakafo ao amin'ny trano fisakafoanana lovia misy sakafo eo an-toerana izay fangaro matsiro amin'ny sakafo frantsay sy aziatika. Anisan'ireo hetsika naroso taorian'izany ny taranja kayak, ny fitsangatsanganana snorkeling na zavatra tena amporisihiko mafy dia ny a mitaingina fiara.
Azonao atao ny mivezivezy ny kilometatra amoron-tsiraka 30 kilometatra mankany amin'ny morontsiraka aorian'ny tanàna amoron-dranomasina sy amoron-tsiraka. Amin'ny ankamaroan'izy ireo dia manolotra ireo Fitsangatsanganana an-tsambo misy fitaratra, fitsidihana snorkeling ary fisitrihana scuba. Ny tena ataon'ny ankamaroan'ny fizahan-tany dia ny Morontsiraka Benjor, mankanesa amin'ny fitsangatsanganana anaty kayak ambany fitaratra ary mandehana any amin'izay misy farafara ranomasina, feso feso sy sokatra an-dranomasina. Eny an-dàlana hiverina, raha manao ny zava-drehetra amin'ny maraina ianao dia afaka misakafo atoandro ao amin'ny Benjor alohan'ny hiverenanao ao anaty buggy.
10 minitra monja avy eo Port Vila no Hippique Club izay ahafahanao misoratra anarana amin'ny iray mitaingina soavaly filentehan'ny masoandro. Maharitra adiny roa sy sasany ny fitsidihana iray, antsasaky ny andro na iray andro iray manontolo, miankina amin'ny zavatra tianao hatao izany, ary afaka mandoa mihitsy ianao raha raisina ary averina any amin'ny hotely. Safidy iray hafa ny fiakarana amin'ireo tampon'ny tendrombohitra izay hitan'i Port Vila eo akaiky eo sy ankafiziny Vanuatu Jungle ZiplineTetezana fampiatoana 80 metatra ny haavony, riandrano, canopy ala, sehatra natsangana tamin'ny tampon-kazo sy fahitana mahafinaritra.
Adventurous kokoa ve ianao? Avy eo misy safidy maro hafa: azonao atao mitsidika ny vohitra Malekula taloha, jereo volkano mavitrika ary milentika miaraka amin'ny dugong. Malampa no anaran'ny faritany ahafahanao milentika tanteraka anaty ala, mijery riandrano, mianatra momba ny tantaran'ny mpihinana olona, snorkeling any amin'ny farihy tropikaly sy maro hafa. Vondron'ireo nosy mahafinaritra izy ary raha te hahafantatra azy ireo dia tsara kokoa ny manakarama fitsangatsanganana mivantana miaraka amin'i Malampa Travel, masoivohom-pokontany tsy miankina amin'ny fanjakana (miaraka amin'ny tranonkalany manokana).
Malekula dia iray amin'ireo nosy lehibe indrindra any Vanuatu, fiteny 30 farafaharatsiny no ampiasaina, na dia amin'ny ankapobeny aza ny tanàna dia mizara ho Great Nambas sy Small Nambas (nomena ny haben'ny mpiaro ny filahiana aboriginal, antsoina hoe nambas). Be tendrombohitra ilay nosy, miaraka amin'ny ala sy ala mikitroka ary paradisa hatao mandeha an-tongotra sy mijery voronas. Ho azonao atao ny manatri-maso ny fiainana andavanandron'ny foko, misakafo, mandihy.
Ary afaka mandeha mitsangatsangana any amin'ny tahiry an-dranomasina ianao, manofa bisikileta, mandro amin'ny riandrano, mandeha anelanelan'ny tendrombohitra, honko, lava-bato na fitsidihana ara-kolontsaina. Ny tsara indrindra dia ny mijanona mandritra ny roa alina ary izany no antony ahafahanao matory amin'ny bungalow any anaty ala sy amoron-tsiraka na any amin'ny trano fandraisam-bahiny. Azonao atao koa ny manova ny nosy, tadidio fa vondrona nosy mandrafitra ny faritany izy.
Ambryn dia nosy volkanika be ary mainty misy volkano miasa ary caldera mafana 12 kilometatra ny savaivony ... ARY I Paama no nosy kely indrindra, zara raha mandray mpizahatany izy ary tsy misy olona mipetraka ao aminy noho ny asany volkano maharitra, miaraka amin'ny fumaroles sy lava, fa na dia hanitsaka azy mandritra ny adiny roa aza ...
Misy toeran-kaleha hafa avy any Éfaté? Eny eny, afaka mandray sidina mankany isika Santo mandeha amin'ny lakana amin'ny renirano Riri ary misasa amin'ny Lavaka Manga malaza, milentika ao amin'ny Champagne Beach ary mahita Zohy an'arivony 50 metatra ny haavon'ny stalactite, stalagmites ary ramanavy. Luganville no tanàna manan-danja indrindra ao Santo ary toerana hanakaramana ireo fitsidihana ireo.
Aiza no hijanonana ao Vanuatu
Misy safidy maromaro: avy trano fandraisam-bahiny mihaja mankany amin'ny bungalow sy kabine backpacker. Ny safidy farany dia tsotra sy tsy lafo ary atolotra amorontsiraka sy any ambanivohitra. Ny bungalow dia vita amin'ny fitaovana eo an-toerana ary namboarina araka ny fomban-drazana. Izy ireo koa dia eo akaikin'ny kianja, ny tsena ary mifandray amin'ny maso ivoho fizahan-tany ary tantanan'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
Eo koa ny trano lafo vidy: trano fandraisam-bahiny, hotely, trano fandraisam-bahiny ary trano fandraisam-bahiny misy vidiny mirary. Any amin'ny faritra afovoan'i Port Vila na amin'ny manodidina no misy azy ireo, amin'ny halavirana izay azo atao an-tongotra. Any Lungaville ihany koa. Ary raha te hijanona kely amin'ny tabataba ianao dia hahita ihany koa trano mora vidy. Raha mila ambaratonga ambonimbony kokoa dia tokony handeha any amin'ny hotely antonony misy trano fisakafoanana na serivisy fisakafoanana maraina ianao.
Any Éfaté, Espíritu Santo na Tanna Island dia ho hitanao ihany koa sokajy misy fijerena ranomasina, serivisy manokana kokoa, efitrano sy spa vitsivitsy, angamba. Ary raha tianao Resorts misy villa koa eny amoron-dranomasina, bungalow ambonin'ny ranomasina, efitrano mihaja, zaridaina, dobo filomanosana ary trano fisakafoanana ambony.
Ahoana ny fomba hahatongavana any Vanuatu
Hay zotram-piaramanidina dimy mampifandray an'i Vanuatu amin'izao tontolo izao via Port Vila na Fanahy Santo. Azonao atao ny mandeha avy any Aostralia, Nouvelle Zélande, Fidji, ilay Solomon na Noumea. Misy zotram-piaramanidina lehibe sy lafo vidy: Virjiny, Solomon Airlines, Fiji Airways, Air Vanuatu, Air Niugini, Air Caledonie, Air New Zeland.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » mpitarika » Vanuatu, paradisa lavitra
Mandehana soa aman-tsara ao anaty fiaranao sy miaraka amin'ny biby fiompinao
Toerana na tsangambato 5 atahorana ny fiovan'ny toetr'andro